Secrets of the Millionaire Mind စာအုပ်ထဲက မှတ်သားဖွယ်ရာလေးတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုတွေးတယ် ဆိုတာကနေ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ဘာဆိုတာ ဖြစ်လာစေတယ် ဆိုတဲ့ အချက်လေးကို ထိမိစေတဲ့ အတွက် ဒီနေရာကနေ တိုက်ရိုက် ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ ရှာတာက ဒီစာအုပ်ကို Download ဆွဲတာပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ အောက်က အချက် ၁၇ ချက်ပါတာက အပိုင်း ၂ ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ အပိုင်း ၂ နဲ့ အပိုင်း ၃ ကိုတော့ ရှာပါဦးမယ်။ ရတော့ တင်ပေးတာပေါ့ဗျာ။ လောလောဆယ်တော့ ဒီပထမပိုင်းလေး နဲ့ပဲ ကျေနပ်ကြပါဦးဗျာ။
Seventeen Ways Rich People Think and Act Differently from Poor and Middle–Class People*
Most people understand we are creatures of habit, but what they don’t realize is that there are actually two kinds of habits: doing habits and not-doing habits. Everything you are not doing right now, you in the habit of not doing. The only way to change these not-doing habits into doing habits is to do them. Reading will assist you, but it’sawhole different world when you go from reading to doing. If you are truly serious about success, prove it, and do the actions suggested.
Wealth File # 1
Poor people platy the money game to not lose.
Wealth File # 5
Wealth File # 6
Wealth File # 9
Wealth File # 11
Poor people thin “either/or.”
Wealth file # 17